वलिउड हलिउड नन्दिताको प्रेममा पल्केर बर्वाद भए गजित नायिका नन्दीता कसीको प्रेममा पल्केका नायक गजित विष्ट वर्वाद भएका छन् । गजितलाई बर्वाद बनाउने काम भने गायक सिडी विजय अधिकारी र निर्देशक प्रदिप निरौलाले गरेका हुन् । गायक सिडी विजय अधिकारीको स्वरमा रहेको बर्वाद भए बोलको गीतको ... .... थप समाचारहरु	झोलेमा दयाहाङ र प्रियंकाको रोमान्स लोकदोहोरी पत्रकारिता पुरस्कार दिइने उदयको जन्मदिनमा सुब्रतको डेब्यू सेती बाढीको डकुमेण्ट्रीको माग बढ्दो रेखाको अंग्रेजी चलचित्र पत्रकारीता दिवसमा सम्मान र पुरस्कार वितरण चलचित्र पत्रकारिता दिवसमा गौतम र श्रेष्ठ पुरस्कृत सुपरस्टार मम कति ब्यस्त ! हामीलाई थाहा छ बलिउड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन सधै ब्यस्त हुन्छिन । कहिले फिल्म सूटिंग त कहिले छोरी (आराध्य) को हेरचाह ! आमाको नाताले पनी छोरीको हेरचाह त गर्ने पर्यो नि की कसो ? एक कार्यक्रममा छोरी संग उपस्थित भयेकी ... .... थप समाचारहरु